Usoro Ọrụ - Word.to
Okwu na PDF
N'okpuru ebe a bụ ntụgharị siri ike nke usoro ọrụ bekee na amụma nzuzo nke bekee maka akụkụ iwu ma na-emetụta naanị Bekee
Okwu. To Usoro ọrụ
Site na ịnweta weebụsaịtị na https://word.to , ị na-ekwenye na iwu ọrụ a ga-agbakwunye gị, iwu na ụkpụrụ niile dị na ya, ma kwenye na ị ga-ahụ maka nrube isi na iwu obodo ọ bụla metụtara. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na nke ọ bụla n'ime usoro ndị a, amachibidoro gị iji ma ọ bụ ịnweta saịtị a. A na-echebe ihe ndị dị na weebụsaịtị a site na iwu nwebisiinka na iwu akara ụgha.
Enyere ikike ka ibudata otu ihe (ozi ma ọ bụ ngwanrọ) na webụsaịtị nke Word.to maka elele onwe onye, na-abụghị nke azụmahịa na-elele naanị. Nke a bụ onyinye nke ikike, ọ bụghị nyefe aha, yana n'okpuru ikike a ị gaghị:
gbalịa imebi ma ọ bụ laa azụ njinia sọftụwia ọ bụla dị na websaịtị Word.to;
nyefee ihe ndị ọzọ ma ọ bụ 'enyo' ihe ndị ahụ na ihe nkesa ọ bụla.
Akwụkwọ ikike a ga-akwụsị ma ọ bụrụ na ị daala nke ọ bụla n'ime mgbochi ndị a, Okwu Word nwere ike ịkwụsị ya n'oge ọ bụla. Mgbe ị kwụsịrị ịlele ihe ndị a ma ọ bụ na njedebe nke ikike a, ị ga-emerịrị ihe ọ bụla ebudatara na ihe onwunwe gị ma ọ bụ na kọmputa ma ọ bụ nke e biri ebi.
A na-enye ihe ndị dị na webụsaịtị nke Word.to na ntọala 'dị ka'. Word.to anaghị ekwe nkwa ọ bụla, gosipụtara ma ọ bụ gosipụta, wee si na ya wepu ma wepu ikike ndị ọzọ niile gụnyere, na-enweghị njedebe, akwụkwọ ikike ma ọ bụ ọnọdụ nke azụmaahịa, ahụike maka otu ebumnuche, ma ọ bụ mmebi iwu nke ọgụgụ isi ma ọ bụ mmebi iwu ndị ọzọ.
Ọzọkwa, Word.to anaghị enye ikike ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-egosi ihe ziri ezi, ma eleghị anya nsonaazụ, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke iji ihe ndị ahụ na weebụsaịtị ya ma ọ bụ na ọ metụtara ihe ndị ahụ ma ọ bụ na saịtị ọ bụla ejikọtara na saịtị a.
Enweghị ihe ọ bụla ga-eme ka Word.to ma ọ bụ ndị na-eweta ya ụgwọ maka mmebi ọ bụla (gụnyere, na-enweghị njedebe, mmebi maka ọnwụ nke data ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi nkwụsị azụmahịa) na-esite n'iji ma ọ bụ enweghị ike iji ihe ndị dị na Word.to na ebe nrụọrụ weebụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na Word.to ma ọ bụ onye nnọchi anya Word.of ejiri akwụkwọ ozi ma ọ bụ ederede ederede banyere mmebi ahụ. N'ihi na ụfọdụ ikike anaghị ekwe ka mmachi dị na akwụkwọ ikike ekwupụta, ma ọ bụ mmachi nke ibu maka nsogbu ma ọ bụ mmebi ọ bụla nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
Ihe ndi putara na webusaiti nke Word.to nwere ike igunye ihiehie oru oru, edemede ederede, ma obu foto. Word.to anaghị enye ikike na ngwa ọ bụla dị na weebụsaịtị ya ziri ezi, zuru ezu ma ọ bụ ugbu a. Word.to nwere ike ime mgbanwe na ihe ndị dị na weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Agbanyeghị Word.to anaghị eme nkwa ọ bụla iji melite ihe ndị ahụ.
Word.to enyochaghị saịtị niile ejikọtara na weebụsaịtị ya ma ọnweghị ọrụ maka ọdịnaya nke saịtị ọ bụla ejikọtara. Nsonye nke njikọ ọ bụla apụtaghị nkwado nke Word.to nke saịtị ahụ. Iji ụdị webụsaịtị ọ bụla nwere njikọ dị n'ihe egwu nke onye ọrụ ahụ.
Word.to nwere ike gbanwee usoro ọrụ a maka weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Site n'iji webụsaịtị a ị na-ekwenye na njikọ nke usoro ọrụ ndị a dị ugbu a.
Usoro ndị a na-achịkwa ma kọwaa dị ka iwu nke Connecticut na ị na-edoghị onwe gị n'okpuru ikike nke ụlọ ikpe na steeti ahụ ma ọ bụ ọnọdụ.
Gbanwee site na Okwu
Okwu ka JPG
Okwu na PNG
Okwu ka Excel
Okwu ka HTML
Okwu iji PowerPoint
Okwu ka ePub
Okwu na JPEG
Okwu ka PPT
Okwu ka PPTX
Okwu na XLS
Okwu na XLSX
Okwu na ICO
Okwu ka BMP
Okwu ka SVG
Okwu na GIF
Okwu ka email
DOC ka PNG
DOCX ka PNG
DOC ka XLS
DOCX ka XLS
DOC ka XLSX
DOCX ka XLSX
DOC ka ICO
Okwu na WebP
DOC ka WebP
Okwu na TIFF
Okwu ka PSD
DOCX ka PSD
Tugharia na Okwu
JPG nye Okwu
PNG na Okwu
JPEG gaa Okwu
DOC na Okwu
DOCX na Okwu
SVG na Okwu
ICO na Okwu
BMP na Okwu
Okwu ka DOCX
Okwu ka DOC
JPG gaa DOC
JPG gaa DOCX
JPEG gaa DOC
JPEG gaa DOCX
ICO ka DOCX
WebP ka DOCX
WebP na Okwu
GIF na Okwu
TIFF na Okwu
PSD ka Okwu
Onye ndezi Okwu
74,787 mgbanwe kemgbe 2020!
Mere site nadermx - © 2021 Word.to
Exceed gafere gị akakabarede ịgba nke otu kwa awa, ị nwere ike tọghata gị faịlụ na 59:00 ma ọ bụ Banye ma tọghata ugbu a.
PRghọ PRO na - enye gị njirimara ndị a